China Water Ukucwilisa Futhi rotary Retort ifektri abakhiqizi | Dingtaisheng
Faka umkhiqizo embuzweni wokuvala inzalo, amasilinda acindezelwe ngawodwana futhi avale umnyango. Umnyango wokubuyisa uvikelekile ngokuxhuma kathathu kokuphepha. Kuyo yonke le nqubo, umnyango ukhiyiwe ngomshini.
Inqubo yokuvala inzalo yenziwa ngokuzenzakalela ngokuya ngokufaka iresiphi ku-micro-processing controller PLC.
Ekuqaleni, amanzi okushisa okuphezulu avela ethangini lamanzi ashisayo afakwa esikebheni sokubuyisa. Ngemuva kokuthi amanzi ashisayo exutshwe nomkhiqizo, usatshalaliswa ngokuqhubekayo ngepompo lamanzi agelezayo nepayipi lokusabalalisa amanzi elihanjiswe ngokwesayensi. Kufakwa umusi ngomxube wamanzi omphunga wamanzi ukwenza umkhiqizo uqhubeke nokushisa nokuhlanzisisa.
Idivayisi eshintshayo yokugeleza ketshezi yomkhumbi wokubuyisa ifinyelela ukugeleza okufanayo kunoma iyiphi indawo ezinkomba eziqonde mpo nezingaphezulu ngokushintsha indlela yokugeleza emkhunjini, ukuze kuzuzwe ukusatshalaliswa okuhle kakhulu kokushisa.
Kuyo yonke le nqubo, ingcindezi ngaphakathi komkhumbi wokubuyisa ilawulwa uhlelo lokujova noma lokukhipha umoya ngamaphayiphu othomathikhi aya emkhunjini. Njengoba inzalo yokucwiliswa emanzini, ingcindezi ngaphakathi komkhumbi ayithinteki ekushiseni, futhi ingcindezi ingasethwa ngokuya ngamaphakethe ahlukile wemikhiqizo ehlukile, okwenza uhlelo lusebenze kabanzi piece 3 piece can, 2 piece can, package flexible, plastic package etc .）.
Esigabeni sokupholisa, ukuvuselelwa kwamanzi ashisayo nokushintshwa kungakhethwa ukuthola amanzi ashisayo anenzalo ethangini lamanzi ashisayo, ngaleyo ndlela konga amandla okushisa.
Lapho inqubo isiqediwe, kuzokhishwa isignali ye-alamu. Vula umnyango bese wehlisa, bese ulungiselela iqoqo elilandelayo.
Ukufana kokusatshalaliswa kwamazinga okushisa emkhunjini kungu- ± 0.5 ℃, kanti ingcindezi ilawulwa ku-0.05 Bar.
Phakathi nenqubo yonke, ijubane lokujikeleza nesikhathi somzimba ojikelezayo kunqunywa inqubo yokuvala inzalo yomkhiqizo.
Ukusatshalaliswa kokugeleza kwamanzi okungafani
Ngokushintsha indlela yokugeleza kwamanzi esitsheni sokubuyisa, ukugeleza kwamanzi okufanayo kufinyelelwa kunoma iyiphi indawo kuzikhombisi-ndlela eziqondile nezingqimba. Uhlelo oluhle lokuhlakaza amanzi enkabeni yethileyi yomkhiqizo ngamunye ukufeza inzalo efanayo ngaphandle kokufa.
Izinga lokushisa High ukwelashwa isikhathi esifushane:
Izinga lokuvala inzalo elifushane kakhulu kungenziwa ngokushisa amanzi ashisayo ethangini lamanzi ashisayo kusengaphambili nokushisa kusuka ekushiseni okuphezulu ukuze kubiliswe.
Ifanele iziqukathi ezikhubazeke kalula
Ngoba amanzi anamandla, angakha umphumela omuhle kakhulu wokuvikela esitsheni lapho ejikeleza.
Ifanele ukuphatha ukupakisha okukhulu kokudla okusemathinini
Kunzima ukufudumeza nokuhlanzisisa ingxenye esemaphakathi yokudla okukhulu okusemathinini ngesikhathi esifushane ngokusebenzisa i-retort emile, ikakhulukazi ekudleni nge-viscosity ephezulu.
Ngokuzungezisa, ukudla okuphezulu kwe-viscosity kungashiswa ngokulinganayo enkabeni ngesikhathi esifushane, futhi kufezekise umphumela wokuvala inzalo. Ukushuba kwamanzi emazingeni okushisa aphezulu nakho kudlala indima enkulu ekuvikeleni ukufakwa komkhiqizo ngesikhathi sokujikeleza.
Isistimu ejikelezayo inesakhiwo esilula nokusebenza okuzinzile
> Umzimba ojikelezayo uyacubungulwa futhi wakheke ngesikhathi, bese kwenziwa ukwelashwa okulinganiselayo ukuqinisekisa ukuzinza kokujikeleza
> Uhlelo lwe-roller lusebenzisa indlela yangaphandle iyonke ukucubungula. Isakhiwo silula, kulula ukusigcina, futhi sinweba kakhulu impilo yenkonzo.
> Uhlelo lokucindezela lisebenzisa amasilinda endlela ephindwe kabili ukuhlukanisa ngokuzenzakalela nokuhlangana, futhi isakhiwo somhlahlandlela sigcizelelwe ukwelula impilo yenkonzo yesilinda.
Amabhodlela epulasitiki, izinkomishi Isikhwama sesilayidi esikhulu
Products Imikhiqizo yobisi
Meals Ukudla okulungele ukudliwa, Iphalishi
＞ Imifino nezithelo
Food Ukudla kwezilwane ezifuywayo
Langaphambilini Amanzi Futha Futhi Rotary Retort
Olandelayo: I-Steam ne-Rotary Retort
Okuzenzakalelayo Water Ukucwilisa Retort
Insimbi Yokucwilisa Amanzi Engagqwali
Ukucwiliswa Kwe-Autoclave Yamanzi
Ukucwiliswa Kwama-Rotary Autoclave Retort
Okuqhubekayo uhlelo lwe-hydrostatic sterilizer